Waqtiga: 2020-07-10 Faallo: 38
Sida kafeega jecel, waxaan jeclahay habka samaynta koob kafeega iyo sida biirka khamriga. Waxaan waqti badan ku qaatay inaan eego hababka brewers ee ku saabsan sida loo diyaariyo qaxwaha. Markaa kuwa danaynaya, waxaan bilaabayaa raadkayga.
Guriga kululaynta saliida Thermail 1BBL
Halsano koronto koronto
Runtii waxaan sameeyay khaladaad badan oo ku saabsan habka, halkan waxaan ku faraxsanahay inaan idinla wadaago dhammaantiin.
Su'aal: Waxaan ku daray kafeega xilliga karkarinta.
Jawaab: Waa qalad, kafeega waxaa ku jira saliid badan oo saameyn ku yeelan kara haynta madaxa haddii lagu daro biyo kulul.
Su'aal: Ma isku dayi karaa kafeega degdega ah maadaama waxa saliiddu ay aad u hooseyso?
Jawaab: Kafeega isla markiiba ma dhadhamiyo sababtoo ah kafeega sixir ahaan uma fiicnaan doono marka lagu daro biirka.
Su'aal: Waa maxay faraqa u dhexeeya digirta qalalan iyo kafeega la shiiday?
Jawaab: Kafeega dhulka la shiiday waxa uu leeyahay sanka kafeega oo aad u daciif ah laakiin dhadhanka qaxwada waa dhalaalaya. Digirta qalalan ayaa ka soo horjeeda, udgoonka ayaa ahaa mid adag oo leh feero miro leh, laakiin waxaa jira dhadhan kafeega oo yar.
Previous: Beer-qarinta oo leh dhadhan kafee
Xiga: Dhaqanka Shirkadda Faa'iidooyinka Shaqaalaha iyo Macaamiisha